OLED Pilot Line Si Loogu Heliyo Helitaanka Fudud ee Lagu Helayo Laser
Adeegga 'Lyteus' oo ay ka mid yihiin goynta leysku-rogo-duub loogu talagalay in lagu taageero horumarinta alaabooyinka nalka cusub. Isku soo wada duub, isukeenid Dalad ay ku jiraan Xarunta Boqortooyada Ingiriiska ee Nidaamka Innovation (CPI) waxay ku bixinayaan adeegyo khad cusub oo tijaabin ah oo marin-u-helid ah oo loogu talagalay LED-ka dabiiciga ah ...
SLAC Waxay Qaadanaysaa Bixinta Lens Laydhka Ugu Weyn Dunida
Qalabka fiidiyowga dijitaalka ah ee Teleskop-ka Weyn ee 'Synoptic Survey Telescope' ayaa ka tagaya LLNL oo diyaar u ah is-dhexgalka. Heshiis weyn: muraayadaha ugu weyn ee kamaradda ugu weyn ee dijital ah. Muraayad dhererkeedu dhan yahay 1.57 mitir oo loo malaynayo inay tahay muraayada indhaha ee waxqabadka sare leh ee abid la farsameeyay ayaa timid SLAC National Ac ...
Fraunhofer HHI wuxuu Xulaa Nidaamka Sputter-ka ee Veeco
Machadka cilmi baarista isgaarsiinta indhaha wuxuu amraa nidaamka iskutallaabista shucaaca si loo abuuro lakabyo wajiga laser iyo aalado micro-optical ah. HHI waxay adeegsan doontaa teknoolojiyadda IBS ee Veeco si ay u abuurto wejiga lakabyada. Qalabka Veeco ayaa ku dhawaaqay inuu geeyay Spector Ion Beam Sputtering (IBS) ...